Iziganeko-Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
Umbutho waMaziko aBhalayo weHlabathi ubamba imisitho emine yonyaka ukudibanisa amalungu ethu kunye nokunika amandla kwiziko lokubhala abaphengululi kunye neengcali.
Inkomfa yonyaka (yonke ukuwa)
Ingqungquthela yethu yokuwa sesona siganeko sikhulu sonyaka sinabantu abangama-600-1000 + abathathe inxaxheba kumakhulu eentetho, iindibano zocweyo kunye neetafile ezijikelezayo kumnyhadala weentsuku ezintathu. Inkomfa yonyaka sisiganeko sokwamkela abafundisi abatsha nabanamava kwiziko lokubhala, izifundiswa kunye neengcali. Apha.
IZiko lasehlotyeni (rhoqo ehlotyeni)
IZiko lethu lasehlotyeni yindawo yokusebenzela eneeveki eziya kuthi ga kwi-45 yeziko lokubhala iingcali ukuze zisebenze kunye ne-5-7 yamava okubhala abaphengululi / iinkokeli. IZiko lasehlotyeni yindawo entle yokuqala yabalawuli beziko lokubhala.
IVeki yamaZiko okuBhala yaMazwe ngaMazwe (rhoqo ngoFebruwari)
The Iveki ye-IWC yaqala ngo-2006 njengendlela yokwenza umsebenzi weziko lokubhala (kunye nokuncoma) ubonakale. Ibhiyozelwa minyaka le malunga noSuku lweValentine.
Intsebenziswano @ CCCC (yonke intwasahlobo)
Intsebenziswano yosuku olunye yinkomfa encinci yonyaka yango-Lwesithathu ophambi kweCCCC (iNkomfa yoBume beKholeji kunye noNxibelelwano) eqala. Ngokujikeleze abathathi-nxaxheba abali-100 bakhetha iiseshoni ezifanayo ngesihloko sokubhala. Abasasazi kunye nabazimaseyo bayakhuthazwa ukuba basebenzise ukuBambisana ukuze bafumane ingxelo kunye nenkuthazo kwiiprojekthi eziqhubayo.
Ngaba ufuna ukufikelela kwabo bakhoyo kunye namalungu? Xhasa umcimbi!
Ngaba ufuna ukubamba umsitho we-IWCA wexesha elizayo? Jonga kwi Isikhokelo sikasihlalo wethu.